ယုန်လေးအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို တောင်းပန်ပေးဖို့ လိုက်ပါလာတဲ့ မြင့်မြတ် – ThuThuLay
ယုန်လေးအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို တောင်းပန်ပေးဖို့ လိုက်ပါလာတဲ့ မြင့်မြတ်
August 6, 2020 By thuthulay Celebrities
အဆိုတော် ယုန်လေးရဲ့ Music Video ကတော့ ယမန်နေ့ကစလို့ ယနေ့အထိ တောက်လျှောက်ဝေဖန်ခံနေရတာ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ Music Video မှာပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ ဒီ Music Video နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတောက်လျှောက်ဖြေရှင်းတောင်းပန်နေကြတာပါ
ယနေ့မနက်မှာတော့ ယုန်လေးအတွက် မြင့်မြတ်ဦးဆောင်တဲ့ OG Crew အဖွဲ့ က ယုန်လေးနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို တောင်းပန်ပေးဖို့ ရောက်ရှိနေကြပြီလို့ သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကို ယုန်လေးက လူမှုကွန်ယက်မှာ အခုလိုပဲ မျှဝေလာခဲ့တာပါ
တော်တော်များများအဆင်းဘီးတက်ပေးတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ စစ် . အတု သိခွင့်ရလိမ့်ပါတယ် .ကိုအယ်ကြီး နှင့် ပါဝင်သူညီ ညီမငယ် အစ်ကို . အစ်မ . အမေမွှေး ဝိုင်းအားပေးသလို .မနေ့က ညနေ့က ည အထိ ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးကောင်မြင့်မြတ် . ပြီးတော့ ကိုခင်လိူင် . ထူးခြား . Kညီ .အတူရှိပေးကျတယ် . နှစ်သိမ့်ပေးကျတယ် .
သူရူတင် နောက်ကျရင် နောက်ကျနိုင်တယ် .ရုပ်ရှင် အစည်းရုံးကို ကျွန်တော့် အတွက် တောင်းပန်ဖို့ ဆိုပြီး အခုမနက်အစောကြီး ထ ပြီးကျွန်တော် ထက် ဦးအောင် .မြင့်မြတ် ဦးဆောင်ပြီး OG Crew အကုန်ရောက်နေကျတယ် .ဒီလို မိသားစုတွေ ရှိတာကိုက အားအရမ်းရှိပါတယ် .Messenger ကနေရာ .Ph နဲ့ ရော အားပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူး.
ဘယ်လို စိတ်ခံစားမူ့ မျိုးကြုံမလဲ ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူ . မိဘမရှိတဲ့ လူတိုင်း ဒီ သိမ်ငယ်အားငယ်စိတ်ကိုသိမှာပါ .မွေးထဲက မိဘနှစ်ပါး လုံးဆုံးတာပါ .ဘယ်ရဲမူးကြီးသား မှ မဟုတ်ပါဘူး ခင်များ .ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲပဲ ခံယူပါရစေ.ပါဝင်ပေးသူ များ တစ်ယောက်နှင့်မှ မဆိုင်ပါ လို့မျှ ဝေထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
မြင့်မြတ်ကတော့ တကယ့်ကို သူငယ်ချင်းကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကူညီပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးတစ်ယောက်အဆင်ပြေပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်
အဆိုတျော ယုနျလေးရဲ့ Music Video ကတော့ ယမနျနကေ့စလို့ ယနအေ့ထိ တောကျလြှောကျဝဖေနျခံနရေတာ ပရိသတျကွီးလညျးသိပွီးဖွဈမှာပါ Music Video မှာပါတဲ့ သရုပျဆောငျတှနေဲ့ အဆိုတျောတှကေတော့ ဒီ Music Video နဲ့ပတျသတျပွီးတောကျလြှောကျဖွရှေငျးတောငျးပနျနကွေတာပါ
ယနမေ့နကျမှာတော့ ယုနျလေးအတှကျ မွငျ့မွတျဦးဆောငျတဲ့ OG Crew အဖှဲ့ က ယုနျလေးနဲ့အတူ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးကို တောငျးပနျပေးဖို့ ရောကျရှိနကွေပွီလို့ သိရတာပဲဖွဈပါတယျဒီအကွောငျးကို ယုနျလေးက လူမှုကှနျယကျမှာ အခုလိုပဲ မြှဝလောခဲ့တာပါ
တျောတျောမြားမြားအဆငျးဘီးတကျပေးတဲ့အခြိနျမှာ မိတျဆှေ စဈ . အတု သိခှငျ့ရလိမျ့ပါတယျ .ကိုအယျကွီး နှငျ့ ပါဝငျသူညီ ညီမငယျ အဈကို . အဈမ . အမမှေေး ဝိုငျးအားပေးသလို .မနကေ့ ညနကေ့ ည အထိ ကြှနျတျော အခဈြဆုံးကောငျမွငျ့မွတျ . ပွီးတော့ ကိုခငျလိူငျ . ထူးခွား . Kညီ .အတူရှိပေးကတြယျ . နှဈသိမျ့ပေးကတြယျ .
သူရူတငျ နောကျကရြငျ နောကျကနြိုငျတယျ .ရုပျရှငျ အစညျးရုံးကို ကြှနျတျော့ အတှကျ တောငျးပနျဖို့ ဆိုပွီး အခုမနကျအစောကွီး ထ ပွီးကြှနျတျော ထကျ ဦးအောငျ .မွငျ့မွတျ ဦးဆောငျပွီး OG Crew အကုနျရောကျနကေတြယျ .ဒီလို မိသားစုတှေ ရှိတာကိုက အားအရမျးရှိပါတယျ .Messenger ကနရော .Ph နဲ့ ရော အားပေးတဲ့ အယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုလညျး ကြေးဇူး မမပေ့ါဘူး.
ဘယျလို စိတျခံစားမူ့ မြိုးကွုံမလဲ ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူ . မိဘမရှိတဲ့ လူတိုငျး ဒီ သိမျငယျအားငယျစိတျကိုသိမှာပါ .မှေးထဲက မိဘနှဈပါး လုံးဆုံးတာပါ .ဘယျရဲမူးကွီးသား မှ မဟုတျပါဘူး ခငျမြား .ဘာဖွဈဖွဈ ကြှနျတျော တဈယောကျထဲပဲ ခံယူပါရစေ.ပါဝငျပေးသူ မြား တဈယောကျနှငျ့မှ မဆိုငျပါ လို့မြှ ဝထေားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ
မွငျ့မွတျကတော့ တကယျ့ကို သူငယျခငျြးကောငျးစိတျဓာတျနဲ့ ကူညီပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ ယုနျလေးတဈယောကျအဆငျပွပေါစလေို့လဲ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော
ရုရှား တိုက်လေယာဉ် က ပင်လယ်နက် ပေါ် ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းလာသည့် အမေရိကန် ကင်းထောက်လေယာဉ် များအား တားဆီး
သီချင်းဗီဒီယိုကိစ္စ အဆိုတော်ယုန်လေး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ သွားရောက်ရှင်းလင်း